Iyo inonakidza korani yeMarco Borsato muKuip kuRotterdam! : Martin Vrijland
Iyo inonakidza korani yeMarco Borsato muKuip kuRotterdam!
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 31 May 2019	• 3 Comments
Kwete kuti ini ndakanga ndiripo, asi inofanira kuziviswa: vhidhiyo yaive zuro izere nekanakidzwa korani naMarco Borsato muDe Kuip. Mazita ose makuru ezuva ranhasi aivapo: Davina Michelle, Maan, André Hazes, Lil 'Kleine, Armin van Buren uye zvichida ndichakanganwa vamwe vashoma. Sei zvichifanira kutaurwa? Nokuti inosangana nepfungwa yechingwa nemitambo uye zvinonakidza kuona mazana makumi ezviuru zvevanhu vakabatikana zvikuru vachipemberera apo masvingo ejeri ari kuvakwa pedo navo. Kunyange zvakadaro, vazhinji havaoni izvi semasvingo ejeri, sezvo vari chikamu cheboka remasoni, mutengesi, mutariri kana mutariri wejeri idzva. Icho chisungwa chisingaonekwi chine maziso chaiwo uye pasina mazariro anoonekwa uye saka hapana munhu anozviona. Izvozvo hazvina kunaka uye hatidi kuti tive nehutachiwana nekushaya hanya.
Handizivi kana iwe uchida firimu The Show Truman ndakazviona uye zvirokwazvo ini ndinokurudzira kutarisa semavhidhiyo mafirimu, mahedheni neTV sezvinobvira, nokuti izvozvo zvichakuisa pasi pe hypnosis. Zvisinei, iyo firimu iri pamusoro pekumutswa kubva kune iyo hypnosis, asi chete uye chete ye protagonist Truman (yakadzwe naJim Carrey). Chiratidziro cheTuruman chechokwadi chedu ndechimwe chinhu chakanyanyisa uye yakawanda vanhu vakawanda vari kushanda nayo uye kune vamwewo vanhu vakawanda vari kubatwa muchokwadi chenhema. Icho chinhu chaicho chinorongedzerwa nehope duku yehuwandu hwevanhu uye vazhinji avo vari chikamu cheMutungamiri weTuruman havazivi kuti ivo pachavo. Ichi ndechokuti maawa evhavha ane mahedheni akawanda uye zvikamu. Nokuti vanhu vanongogadzira radhi pazviri rose, ivo pachavo havaoni kuti ivo chikamu chenguva yekambani yekambani nekunyengera. Musoro wepamusoro unozviziva ndiwo dambudziko rakakomba uye hatigoni kuzvibata kuti tive nehana; kana zvisina kudaro vaisazoita izvi.
Zvimwe iwe uri muverengi mutsva pano uye unozviwana zvose zvisina maturo. Iwe haufungi kuti iwe uri rudzi rweTrin Show zvachose. Iwe pamwe uchawana kuti 'negativism' uye iwe unoda kugara kure nevasina kunaka. Iwe uchawanawo zviratidzo zvakafanana neyaMarco Borsato nevamwe vake vanyori pamwe zvichida kungofanirwa kushamwaridzana kwehupenzi uye kunakidzwa kwakanaka (zvichienderana nekunaka kwako). Iwe unogona kutove uchidada nemichero yakakura iyo yeNetherlands isingakwanisi kuisa pasi. Iwe unogona kuziva kuti vaRoma zvakare vakapa vanhu chingwa nemitambo, asi iwe wakanaka nazvo; iwe unongonakidzwa nazvo. "Isu tiri tose zvakanaka pamwe chete!" Unofunga kuti kufunga kuti jeri ringatiumba matiri rinenge risina maturo. Ichokwadi, izvi zvinoshanda kune vakawanda. Izvozvo ndizvo zvaunoona muvhidhiyo iri pasi apa. Tarisa nokuda kwaro. Izvo zvakare ivhidhiyo inonakidza, nokuti vanhu vari pasi pe hypnosis vanofunga kuti vari kudya mango yakanaka yemango. Saka ivo havakwanisi kuravira asidi yemononi iyo yavanoruma.
O iwe hautendi iwe uri kuchengetwa pasi pe hypnosis? Pakutanga, Truman haana kuziva kuti akanga achibatwa muchokwadi chenhema kusvikira atanga kuona zvinhu zvinoshamisa. Iye zvino iwe unogona zvakare kutaura: "Handifariri kuona zvinhu izvo zvinoshamisa uye ndinofunga kuti zvakanaka chaizvo mararamiro angu iyezvino." Uyezve, varindi veTrans Show (vavaki vese radar basa rinochengetedza izvi) vane (nouchenjeri kwazvo) vakavimbisa kuti vanhu vanofunga zvakadzama vanonyadziswa kuti 'vanofunga mano,' 'vakarurama', 'nationistic' 'anti- kudyidzana kwepasi pose, 'anti-climate measure', 'vanhu vanotenda kuti nyika yakadzika', nezvimwewo, saka hamudi kuva veboka iroro. Zvadaro verenga ichi chinyorwa kuitira tsanangudzo yakazara yekuti vakaita izvi sei.
Saka kana iwe ukamira panzvimbo iyoyo ye hypnotist Rasti Rostelli uye ini ndaizosimuka ndichidanidzira kuti uri kudya muteu unovava uye kuti zino rako rejeri riri kuchinjwa; kana ndikakwanisa kukuratidzai ganda jena uye mbeu semuenzaniso wekuti ndimon, iwe ungandiyeuchidza kuti ndisiye uye ndichengetedze muromo wangu. Pashure pezvose, unoziva nechokwadi kuti uri kudya mango yakachena. Saka iwe hausi kuda kundinzwa uye iwe uri pakati peboka riri pasi pekunyengedzwa newe, uyo zvakare haadi kundinzwa. Hapana anoda kunzwa kuti vari kunyanya kudya mandimu. Pamwe chete iwe unoseka uye iwe unondishora.
Zvisinei, uchapupu hwakanaka zvakajeka, asi haudi uye haugone kuzviona nokuti uropi hwako huri-kudarika mashoko. Zvisinei, lemon yakasviba:
Hurumende dzinoshandisa nhau dzefake, maitiro ekugadzirwa kweTV, kuburikidza nekudzika uye mazano ehurongwa mupfungwa maitiro (PsyOps) kuitira kuti ugamuchire mutemo wekuti chero vagari vemo vanogona kubva mumigwagwa pasina kupindira kwechiremba chepfungwa kana mutongi (ona ichi chinyorwa en iyi tsanangudzo pairi). Pasi nevashori!
Shanduro ye5G iri kuvakwa inoita kuti hurumende dziite vanhu chikamu chekugadzirisa chirongwa che digital, umo DNA inogona kuchinjwa paIndaneti uye uropi hwemunhu hunogona kutambanudza paIndaneti (kuverenga nekunyora kushanda). Izvi zvinovapa simba rose pamusoro pevanhu. Murairo weizvi uri kugadzirirwa kuburikidza nekushata kwemashoko epfungwa dzepfungwa dzinofanirwa kupa nzira yekugamuchirwa DNA databases, kurasa muviri wemunhu (mutemo wemupi wehupi). Utano hwehupi hunotengeswa kuvanhu kuburikidza kune rumwe rutivi kutyisidzirwa kweuchenjeri hwekugadzira (AI) kuchatibata uye kuisa dambudziko, kuitira kuti tigone kuwirirana zviri nani naro (Elon Musk) uye kune rumwe rutivi kuburikidza nekupa chizvarwa chitsva mukana wekudzidza nekukurumidza uye, semuenzaniso, kuburikidza nemutambo uye mhizha yepabonde.
Hurumende dziri kushanda purogiramu yekudyidzana kwenyika yose inoshandisa zvinopesana kana zvekusimudzira. Iwe unofanira kufunga nezveU.S. kurwisana neRussia / China, asiwo wehutongi mune zvematongerwo enyika. Ichi ndicho chitarisiko chesiboshwe zvichienderana nekodzero kana yekare yakarongeka urongwa uye "hutsika hwezvematongerwe enyika." In ichi chinyorwa Ndinotsanangura kuti, somuenzaniso, vezvematongerwe enyika enyika vanoita kuburikidza nekushorwa kunodzorwa.
Hurumende munyika yose inopikisa nhema dzenhema (LGBTI) nokuti dziri kutsvaga kudarika-kudarika kwenyika yose. Nharaunda iyo iyo mitemo yehutano yehutano inotsiviwa nehutachiona hwemhando dzepabonde (kutanga nemhando dzakasiyana-siyana dzinosanganiswa dzinonzi LGBTI); Nharaunda iyoyo haichazokwanisi kubereka nenzira yepanyama uye kuitira kuti kutonga kuchave zvakare nehurumende. Kusiyana kwekusarerekera mune zvepabonde kunewo zvechitendero (Luciferian, rainbow). Nyika itsva yeLuciferian mukurwisana kwechitendero chenyika ye1, 1 zvepabonde (zvepabonde nehutongerwo enyika uye yevanhu) uye hurumende yeHNUMX yenyika.
Izvo zvinyorwa zviri pamusoro apa ndechidimbu chidimbu cha citric acid yaunodya. Pane zvakawanda zvakawanda zviri kuitika, asi ichi chinhu chiduku.
Ndinokukumbira kuti ubve muhutano hwako uye uswededze vanhu vanomira newe pazamu re Rasti Rostelli. Marco Borsato yemunyika ino aripo kuti uchengetedze pasi pehutanosi kuburikidza nekuvhiringidza kwakanaka uye zviratidzo. Pachivande kana pasina kuziva icho, vanoita kuti hurumende ishandise.
Iwe unogona kubvunza: Kana Marco Borsato akazvipira nemaune kudarika kwenzira ye transgender kuburikidza naDavidina Michelle (ona ichi chinyorwa), angadai achinyanya kuzvikudza nebasa rake uye anofara zvikuru neakawanda yakazara yebhangi yebhangi, achiziva kuti vana vake vangasarudza kugadzirisa zvepabonde mumakore mashomanana? NdiJohn de Mol, muridzi weAnP, anofara nemabhiriyoni aya mubhengi rake rebhangi kana ari kutuka usiku apo anorota iye ane mhosva yePyyOp fake news productions? Tichava seanofara mumakore mashomanana apo isu tichirarama pasi pesimba rekutonga rehurumende? Nenguva iyo, zvisinei, iwe hausisina rusununguko rwepfungwa (chaizvoizvo, nokuti ubongo hwako huri muIndaneti) kuti hukwanise kufunga pamusoro peizvi.
Iwe hauchazodi kutora maziso ako akavharwa. Iwe haufaniriwo kutarisira kuti vatungamiri veTruman Show vachakurumidza kuva mberi kwako munguva yemberi. Vanoda kutongesa zvakakwana kwenhamba yepasi rose inotungamirirwa kubva mugore. Saka iwe unofanira kuita shanduko iwe pachako! Verenga tarira iwe unozviita sei.
Source chinyorwa listings: imdb.com
Michael P. Thijs H. Jos B. nenyaya dzekuuraya mhizha dzinotungamirira mukusvitsa kwakakurumidza kwekutya mitemo inobata munhu wose
Positivism uye tariro!
Elon Musk pamusoro pechidzidzo chekufananidzira, tariro uye 'rwendo'
Tags: 2019, André Hazes, ANP, Armin van Buren, konzati, Davina Michelle, Featured, john de mol, Cockpit, Lil 'Kleine, maan, reRotterdam
31 May 2019 pa 22: 33
Mharidzo inonyanya kukosha kubva kuChokwadi munhu inoratidza ndeyekuti iwe unofanira kukunda kutya kwekusununguka. Pakupera kwemufirimu iye anouya kumadziro aanofanira kukwira kuti ave akasununguka. Kamwe kamwe kumusoro ndiye anofanira kupinda murima kubva pa (chivako) chiedza. Iwe unotanga kupinda mumumvuri kuti usvike kuchiedza chechokwadi.
Zvinonzwika zvakanyanya kuti zvive chokwadi kuti tiri kukwira pamusoro pebvumbi rakapoteredza pasi redu kuti tipe kune dzimwe nyika dze33. Pane dambudziko rimwe chete raunenge uchiri muhumwe humwe huri huri huno huri huno. Uyu ndiwo musungo wepasi rakapoteredza nhaurirano, inoramba ichikuchengetedza iwe muhurumende yauri ikozvino.
Ndinofunga kuti kune imwe chete nzira yekubuda uye iyo iri kuburikidza nerufu (kutya).
Tinenge tisingafunge pamusoro pazvo kwenguva yakareba, saka zvakanaka kuti rimwe boka rinorongeka nguva dzose.
Nhasi tsvuku 🎈😉
1 June 2019 pa 01: 53
Nzvimbo yakadzika yepasiyano ndeyehuori hwemanyepo (kusanyatsozivikanwa) kwechakapwanyika (pasi) chidimbu umo isu (kufunga) isu tiri kurarama. Pfungwa ndeyokuti tinoona kuti tinorarama mukufananidza kweLuciferian (pasi yakaderera).
1 June 2019 pa 01: 54
Apo "hupenyu" isiri shoko rakarurama. Tinocherechedza ((multi player) kuenzanisa uye yedu (kuona uye kutamba pamwe) mweya ndiyo inenge iine mutongi uri muruoko.
« Michael P. Thijs H. Jos B. nenyaya dzekuuraya mhizha dzinotungamirira mukusvitsa kwakakurumidza kwekutya mitemo inobata munhu wose
The Thijs H. PsyOp yaifanira kukanganisa nyanzvi yehupfumi uye iyo yakatove yakagadzirirwa nhasi »
Total Visits: 15.826.267
Ko Iranian yakarwisa-ndege system yakatora iyo Boeing 737-800 (kubhururuka PS752) yakabviswa?
Inguva yakareba sei VaTrump vari muchigaro chekushungurudzika ikozvino izvo zviratidzo zvekutanga zvehondo yevagari zvave kuoneka?
Iran, kurwiswa kwaSoleimani, kurwisa uye kupfura kubhururuka PS752 zvese zvagara muchiitiko?
Kuberekwazve uye kutenderera kwechokwadi sezvatinozviona
SandinG op Ko Iranian yakarwisa-ndege system yakatora iyo Boeing 737-800 (kubhururuka PS752) yakabviswa?
ongorora op Ko Iranian yakarwisa-ndege system yakatora iyo Boeing 737-800 (kubhururuka PS752) yakabviswa?
Martin Vrijland op Ko Iranian yakarwisa-ndege system yakatora iyo Boeing 737-800 (kubhururuka PS752) yakabviswa?